Ardayda Kulliyada - Shuraakada Oregon-Gaajo Xorta ah
Arday badan oo jaamacadeed ayaa waligeed la halgamaya gaajo. SNAP waa kheyraad ku caawin kara. Ardayda 18-49 ee dhigta waxbarashada sare ugu yaraan nus-wakhti waxa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan SNAP iyagoo buuxinaya tilmaamaha dakhliga iyo shuruudo dheeraad ah.
Sharciga gargaarka COVID-2020 ayaa la ansixiyay Diseembar XNUMX wuxuu ballaariyay u-qalmitaanka SNAP ee ardayda kuleejka - taasoo u oggolaanaysa arday badan inay u qalmaan iyagoon buuxin shuruudaha shaqada. Ardaydu hadda way u qalmi karaan SNAP haddii ay:
U qalma waxbarasho shaqo - ardaydu uma baahna inay helaan boos waxbarasho ama abaal-marin
Hayso Qiyaasta Waxtarka Qoyska (EFC) ee $0 ee FAFSA
Ardeyda kuleejku waxay weli ugu qalmi karaan SNAP siyaabo kale oo badan, hoos ka eeg macluumaad dheeraad ah.
Kuwa ka hooseeya tilmaamaha dakhliga Oregon waxay xaq u yeelan karaan SNAP
*Ardayda dhigata fasalka wax ka yar nus saac iyo kuwa da'doodu tahay 50+ uma baahna inay buuxiyaan shuruudo arday oo dheeri ah, kaliya dakhliga, si ay ugu qalmaan SNAP.
Shuruudaha Ardayga Cusub
Ardeyda buuxisa shuruudaha dakhliga waxay u qalmi karaan SNAP haddii ay buuxiyaan shuruudahan cusub
Ardaydu waxay u baahan yihiin inay u sheegaan Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon (DHS) inay ogaadaan waxa ardayga loogu talagalay shaqada ay noqon doonto ka dib markay dhammeeyaan waxbarashadooda. DHS waxay rabtaa inay fahanto xidhiidhka ka dhexeeya waxbarashada iyo shaqada ardayga.
Inta lagu jiro wareysiga ay la leeyihiin shaqaalaha DHS, ardaygu wuxuu u baahan doonaa inuu la wadaago sababta ay u aadayaan dugsiga iyo sida ay ula xiriirto shaqada ay rabaan ka dib markay dhammeeyaan waxbarashadooda heerka koowaad (barnaamij afar sano ah ama ka yar - tani waxaa ku jira shahaadada koowaad ee jaamacadda, saaxiibada). , shahaado ama barnaamijyo tababar oo gaaban).
Ardaydu waa inay wadaagaan shaqo gaar ah oo ay jeclaan lahaayeen inay qabtaan markay dhammeeyaan waxbarashadooda.
Tusaale ahaan, haddii ardaygu baranayo shaqada bulshada, waa inay wadaagaan inay rabaan inay noqdaan shaqaale bulsho.
Shaqooyinka u baahan shahaado sare, sida qareen ama dhakhtar, kuma habboona shuruudahan.
Haddii ardaygu buuxiyo shuruudahan, ma jiraan shuruudo shaqo oo ardayga laga rabo.
Haddii Ardaygu Buuxin Waayo Shuruudaha Cusub, Waxaa Jira Siyaabo Kale Oo Lagu Muto
In kasta oo arday badan oo Oregon ku nool ay u qalmi doonaan SNAP marka la eego shuruudaha cusub, qaarkood ma dhici karto (sida ardayda qalin-jabisa). Ardaydan, waxaa weli jira habab kale oo ay ugu qalmaan.
Lagu abaalmariyo waxbarasho shaqo – ardaygu uma baahna in boos la hubsado marka ay codsadaan, laakiin ardaygu waxa uu u baahan yahay in uu damco in uu boos ka helo xilliga dugsiga soo socda.
Shaqaale mushahar qaata ama iskaa u shaqeysta oo shaqeeya celcelis ahaan 20 saacadood todobaadkii
Ma shaqayn karo sababo jireed iyo jir ahaanba
Mas'uul ka ah daryeelka ilmaha (shuruudaha da'da ayaa khuseeya)
Ka qaybqaadashada barnaamijka hal-abuurka iyo fursadda ee aWorkforce (WIOA) Ka hel barnaamijyadan Liiska Bixiyaha Tababarka ee Xaq u leh (ETPL)-liiska lagu soocay dugsiga
Qaadashada Magdhawga Shaqo La'aanta
Waxyaalaha kale ee saameeya u-qalmitaanka
Haddii qorshaha cunnada ardaygu bixiyo in ka badan 51% cuntadooda wiiggii marka loo eego ayan u qalmin SNAP. Haddii qorshaha cuntadu uu bixiyo wax ka yar kala badh cuntada ardayga todobaadkii, helitaanka qorshaha cuntada ma saamaynayso u-qalmitaanka ardayga ee SNAP.
Ardayda da'doodu ka yar tahay 22 sano ee weli la nool waalidkood ama dadka masuulka ka ah waa inay ka codsadaan waalidkood.
Kaalmada dhaqaale ee laga helo Maamulka Ciidamada Halyeeyga ama deeqaha waxbarasho ee gaarka ah ayaa lagu tiriyaa dakhli ahaan.
Ardayda fasaxa ka baxaysa dugsiga waa inay weli buuxiyaan shuruudaha ay xaq ugu leeyihiin SNAP (tusaale, haddii aad u qalanto inaad shaqeyso 20 saacadood toddobaadkii, waxaad u baahan doontaa inaad tan sii waddo fasaxa xagaaga).
Fiiro gaar ah: Kaalmada maaliyadeed ee dawladda dhexe oo ay ku jiraan deeqaha Pell, amaahda Perkins, amaahda Stafford iyo inta badan waxbarashada shaqada looma xisaabiyo dakhli ka soo horjeeda u-qalmitaanka ardayga. Ardaydu waxa ay dib u dhigi karaan lacagaha amaahda ardayda federaalka marka ay qaadanayaan manfacyada SNAP iyaga oo aan wax ribo ah lagu soo dalacsiin.
CODSASHADA KU SAABSAN
Ka caawi faafinta ereyga ku saabsan SNAP ardayda
Aad bey uga muhimsan tahay waligeed in lala wadaago ardayda Oregon wax ku saabsan SNAP maadaama arday badan ay u qalmaan laakiin aanay ka qayb qaadanayn barnaamijka. Isticmaal agabkan si aad u bilowdo wacyigelinta SNAP ee dugsigaaga si aad u hubiso in ardaydu fahmaan sida loogu qalmo oo loo helo kaalmada cuntada.
haye ARDAYDA! POSTER SNAP
XANUUNKA ARDAYDA BOOKMARK
Ingiriisi (keli ah)
SIDA LOO CODSADO SANAP
Qalabka Gargaarka iyo Gargaarka ee Kulliyada SNAP
Ka hel agab aad kaa caawinayso faafinta ereyga SNAP ee kuliyadaada qalabkeena. Qalabka waxa ka mid ah qorshaynta iyo xeeladaha wacyigelinta
hagaha caawinta codsiga, wacyigelinta iyo agabka isgaarsiinta, iyo agabyo badan si ay kaaga caawiyaan hubinta in ardaydu ay heli karaan SNAP.
Nagala soo xidhiidh 503-595-5501, [emailka waa la ilaaliyay]